ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AMAZWE Abadlali bebhola ekhatywayo abangamaNgesi I-Mason Greenwood Ibali loBuntwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football genius eyaziwayo “IGreenwood”. Ibali lethu leMason Greenwood Childhood Ibali kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukusuka ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku. Uhlalutyo lubandakanya ubomi bakhe bokuqala, imvelaphi yosapho, ubomi bomntu, iinyani zentsapho, indlela yakhe yokuphila kunye nezinye izinto ezincinci ezaziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba ungomnye wabadlali abahamba iinyawo ezimbini kwiBhola ekhatywayo yale mihla. Nangona kunjalo bambalwa kuphela abajonga iMason Greenwood's Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
Iinyani zeMason Greenwood yoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
Ukuqala, I-Mason NguJohn Greenwood Wazalwa ngomhla we-1st ka-Okthobha u-2001 kwilali encinci yaseWibsey kufutshane naseBradford, eNgilane. Wazalelwa kunina, uMelanie kuyise, uAndrew.
UMason Greenwood wazalelwa kubazali okwaziwa kancinci ngaye. IiCredits Zemifanekiso: Ilanga kunye nePXhere.
Isizwe saseBrithani sobuzwe obuxutyiweyo kunye neengcambu zaseAfrika wakhuliselwa kwindawo yakhe yokuzalelwa eWibsey ngase Bradford apho wakhulela ecaleni kukadadewabo omkhulu - u-Ashton. Ukukhula eWibsey, iGreenwood yayiyinxalenye yosapho eyayixabisa ezemidlalo kunye neembaleki.
Umncinci uMason Greenwood wakhuliselwa eWibsey eBradford. IiCredits Zemifanekiso: Ilanga kwaye WorldAtlas.
Ngenxa yoko, uGreenwood wakhula enothando ngebhola kwaye wayengumfana othanda inkwenkwe yaseManchester United apho azenzela khona iinkwenkwezi Wayne Rooney. Ngeli xesha umdlalisa webhola ekhatywayo wayeneminyaka eyi-5, waqala wadlalela iqela lendawo - iWestwood Juniors kwaye ejonge kwikamva eliqinisekileyo lomdlalo.
U-Greenwood omncinci ubambe iNdebe yaseYurophu emva kokuphumelela kwe-United United Kingdom e-Moscow e-2008. Ityala lemifanekiso: Ilanga.
Iinyani zeMason Greenwood yoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Imfundo kunye neBraduer Buildup
Ngelixa wayedlalela iWestwood Juniors, uGreenwood wenza izinto ezintle ezatsala umdla wabantu beManchester United abagqugquzela ukungena kwakhe kwisikolo sokuphuhlisa iklabhu eHalifax.
Kwakusezifundweni apho iGreenwood yaqala ukubonisa umlingiswa kunye nobuchule obubandakanya ukuvela kwangoko ukwenzela ukuziqhelanisa, ukukhupha isibhamu esinamandla zombini iinyawo kunye nokuphunyezwa ngokukhawuleza kwalo naliphi na iqhinga elibonisiweyo.
Inkqubela phambili kaMason Greenwood kwiziko lemfundo ye-United yayikukuxhuma kunye nemida. Ityala lemifanekiso: Ilanga.
Iinyani zeMason Greenwood yoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Ubomi bokuqala
U-Greenwood unyuke ngokuthe ngcembe kwinqanaba leqela lolutsha laseManchester, ukurekhoda izibalo ezinomtsalane kunye nokuzibandakanya kwimidla yokhuphiswano njengeembaleki apho wangena khona kukhuphiswano lwe-Under-13 olambona waphula irekhodi le-Great Britain 100 yeemitha zeqela lakhe.
Kwincopho yobomi bakhe bokuqala, ifomu ephezulu yeGreenwood yambona ekhuselekile kabini kwiqela laseManchester United elingaphantsi kwe18 kwisizini ye2017-18. Ngelixa kwicala lolutsha, wagqiba njengowokufumana amanqaku aphezulu kwi-U18 Premier League North ngamanqaku e-17 kwimidlalo ye-21 kwaye wabizwa ngokuba nguMdlali weTonamenti xa icala lakhe laliphumelela i-ICGT Trophy eNetherlands.
IGreenwood yayiyeyona nto ibalaseleyo kwiqela le-U18 ye-United United States nangona yayenziwe ukuba yeqele ukudlala iqela le-U16. Ityala lemifanekiso: I-DailyExpress.
Iinyani zeMason Greenwood yoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Iindaba zokuBamba igama
I-2018 yayingunyaka apho iGreenwood yaqala ukuqeqesha kunye neqela lokuqala laseManchester kwaye yanikwa indawo ebhentshini kumdlalo wokugqibela weqela leChaps League ngokuchasene neValencia nguManejala emva koko Jose Mourinho. Indoda endala ye17 ke yaqhubeka nokuhamba neqela lokuqala le-United kuhambo lwabo langaphambi kwexesha laseMelika kwaye kungekudala lenza ukungabi nako kukhuphiswano njengendawo kaLuka Shaw kwi1-1 yaseMelika ngokuchasene neClub America.
Ukubonakalise ukuba ungomnye wamathemba akhulelweyo kwi-United's Academy, uGreenwood wanikwa ikhontrakthi yakhe yokuqala kwi-2nd ka-Okthobha ka-Okthobha, nangona kunjalo, akazange asetyenziselwe umdlalo omkhulu kwiinyanga ezintlanu ezizayo.
UMason Greenwood wasayina isivumelwano sakhe sokuqala somsebenzi kunye neManchester United kwi2nd ka-Okthobha ka-Okthobha. Ityala lemifanekiso: Manutd.
Iinyani zeMason Greenwood yoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Ukuphakama Kwigama leNdaba
Ekugqibeleni u-Greenwood wenza udibano lakhe lokukhuphisana kwi-6th kaMatshi 2019 njengendawo ebibambela ngexesha lokuphumelela kwe-United Nations i-3-1 xa ithelekiswa neParis Saint Germain kwi-UEFA Champions League. Ngomhla wokuqala, uGreenwood oneminyaka eyi-17 kunye neentsuku ze-156 - waba ngumdlali wesibini omncinci ukumela iManchester United kukhuphiswano lwaseYurophu kunye nongoyena umncinci kunabo bonke kwi-Champions League.
Ukuqhubela phambili ukuza kuthi ga ngoku, u-Greenwood uqinisekisile ukubaluleka kwakhe kwiqela lokuqala leManchester United njengethemba eliya phambili kunye nabaninzi abamthelekisa nabadlali abanjengoVela URobin Van Persie Wayne Rooney kwaye Ryan Giggs. Bonke abanye, njengoko besithi, yimbali.
U-Greenwood uzimisele kakhulu kwiqela lokuqala le-United ukuba uhlala ethelekiswa neeklabhu zeqela. Ityala lemifanekiso: Imihla yonke.
Iinyani zeMason Greenwood yoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Ubuhlobo boBomi boBomi
Imason Greenwood isazakutshata ngexesha lokubhalwa. Sikuzisa iinyani malunga nembali yakhe yokuthandana kunye nenqanaba lobudlelwane. Thetha ngembali kaGreenwood yokuthandana, incinci yayisaziwa malunga nobomi bothando bangaphambi kokuba anyuke adume.
Kwakungekho kude kube yi-8th kaJuni 2019 ukuba uGreenwood wathumela ifoto yentombazana yakhe encinci eyaziwayo kwi-blonde kwi-Instagram. Ngelixa ubunikazi beli nenekazi lisaza kuqinisekiswa ngexesha lokubhalwa, kukholelwa ukuba iGreenwood inqwenela ukugcina ubudlelwane bayo kwinqanaba eliphantsi okwangoku. Okwangoku, akukho namnye duo ononyana (s) okanye intombi (s) ngaphandle komtshato ngexesha lokubhala.
UMason Greenwood kunye nentombazana yakhe encinci eyaziwayo. Ityala lemifanekiso: Instagram.
Iinyani zeMason Greenwood yoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Ubomi beNtsapho
IMason Greenwood ivela kwimvelaphi yosapho olukumgangatho ophakathi. Sikuzisa iinyani malunga nobomi bosapho bakhe.
Malunga notata kaMason Greenwood: U-Andrew ngutata kaGreenwood. Ungunjineli osebenza kwindawo yase Yorkshire ngelixa usapho lwakhe luhlala eManchester ngexesha lokubhala. U-Andrew wayenempembelelo entle kubomi bangaphambili kwaye uyamxhasa kumgangatho katata.
Malunga noMason Greenwood mama: UMelanie ngumama kaGreenwood. Uncede ukuba negalelo kule nkqubela phambili ikhuliswe ngokukhethekileyo ekumfundiseni ukuba athobeke kwaye azinzise njengobekekileyo kwilungelo lakhe lanamhlanje. UMelanie uhlala kufutshane neGreenwood eManchester njengenxalenye yemizamo yokubonelela kwangaphambili ngendawo elungileyo enokuthi imfumane kude kwinkqubela phambili yakhe.
UMason Greenwood wakhuliswa ngabazali abaxhasayo abo kuncinci okwaziwayo malunga naye. IiCredits zoMfanekiso: ClipArtStation kunye Manutd.
Malunga nomntakwaboGreenwood siblings: IGreenwood inodade osele ekhulile ochongwe njengo-Ashton. Ungumntu obhaptiza obalekela iTrafford kwaye ufunda kwiYunivesithi yaseManchester Metropolitan kwisifundi sezemidlalo ngexesha lokubhala. Akukho mathandabuzo kufutshane neGreenwood naye onomdla wokudlala.
Malunga nezihlobo zeMason Greenwood: Kude nosapho lakwaGreenwood olusondeleyo, kuncinci okwaziwayo ngootatomkhulu nootatomkhulu kunye notatomkhulu noomakhulu. Ngokufanayo, akukho zirekhodi zoomakhulu, oomalume, oomalume, abatshana, ukanti abazala bakhe abachongwanga kwimicimbi ebalulekileyo yobomi bakhe bokuqala kude kube ngoku.
Iinyani zeMason Greenwood yoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Iinkcukacha zobomi bomntu
Yintoni eyenza i-Mason Greenwood ikhreyithe? Hlala emva njengoko sikulethela ubuntu bakhe ukukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo ngaye. Ukuqala, i-persona yeGreenwood ngumdibaniso weempawu zobuntu beLibra zodiac.
Uphantsi emhlabeni, enomdla, enoxanduva kwaye kunqabile ukuba aveze iinkcukacha ngobomi bakhe bobuqu kunye babucala. Ngokumalunga nezinto uGreenwood anomdla kuzo kunye nezinto azithandayo, uyakuthanda ukumamela umculo, ukudubula, ukuthatha iifoto, ukubukela imovie kunye nokuchitha ixesha nabahlobo bakhe kunye nosapho.
IGreenwood ithatha iifoto njengemidlalo yexesha elidlulileyo. Ityala lemifanekiso: Instagram.
Iinyani zeMason Greenwood yoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Lifestyle Facts
Ixabiso le-Mason Greenwoods lixabisekile ngexesha lokubhalwa. Nangona kunjalo, unexabiso lentengiso ye- $ 7,00 Million. Imvelaphi yexabiso lakhe elincinci elaziwa njenge-net ine-bedrock kumvuzo awufumana kwimidlalo yebhola ngelixa uhlalutyo lwendlela yakhe yokuphila ibonisa ukuba uphila ubomi bokuzilolonga.
Kuyingenelo ukuqaphela ukuba iGreenwood ayisiyali enkulu ngexesha lokubhalwa, ke ngoko ugxininiso lubekwe kakhulu kwimidlalo yangaphambili kwibala lokudlala endaweni yokuba abe nezinto ezinjengezindlu kunye neemoto.
Akukho nto ingako eyaziwayo malunga nendlela yokuphila kukaGreenwood ngaphandle kwebhola ngexesha lokubhala. Ityala lemifanekiso: Instagram.
Iinyani zeMason Greenwood yoBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Inyaniso engekho
Ukuqulunqa ibali lethu lobuntwaneni beMason Greenwood kunye ne-biography sibonisa iinyani ezingachazwanga okanye ezingaziwayo ezingabandakanywanga kwi-bio yakhe.
UMason Greenwood wazalwa waza wakhula njengomKristu. Ingakumbi, inamagama angamaKristu kodwa ayiphumanga izimvo ngemicimbi ephathelele kwinkolo.
Ungumntu welinye ilizwe laseNgilane kwaye umele iqela lebhola lesizwe lase-England eliphantsi kwe-17 kubandakanya nokuba yinxalenye yeqela eladlala kwi-Algarve Tournam ePortugal.
I-Mason Greenwood eluxanduva lwamanye amazwe kwiqela laseNgilani U17. Ityala lemifanekiso: IHITC.
Umphambili awunazo ii-tatoo kwaye khange ubonwe usela ngexesha lokubhala. Akanikwanga nokutshaya.
Umlinganiswa ophambili weGreenwoods iinyawo ezimbini ngobuchule bakhe kukuthatha iziqwenga zokuseta ngonyawo olungalunganga.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu leMason Greenwood yaBantwana kunye neNqaku le-Biology ye-Mason. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
I-Leighton Baines Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts